Hadda: Madaxtooyadda Somalia oo Hoobiyaaal lagu weeraray. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jul 4, 2017
War Hadda ku soo dhacay Warbqabadka Hornafrik ayaa sheegaya in Tiro Hoobiyayaal ah lagu weeraray Madaxtooyadda Somalia. Waxaana lagu maqlayay Agagaarka Madaxtooyadda Hugunka Hoobiyaasha oo ku dhacay goobo dhawr ah.
Wariye ka tirsan Hornafrik oo ku sugan agagaarka Madaxtooyo ayaa xaqiijiyay in Koontaroolka Shimbiraale oo laga illaaliyo Madaxtooyadda, kuna Dhawr Xarunta Booliska iyo Wasaaradda Warfaafinta uu ku dhacay mid ka mida Hoobiyayaasha, isla markaana uu waxyeelo gaarsiiyay Ciidan ka tirsan Illaaladda Madaxtooyo iyo Caruur goobta ka ag dhawaa.
Hoobiye kale ayaa isna ku dhacay Xarunta Baarista Nabadsugidda ee ku dhaw Madaxtooyo. Mana cadda khasaaraha uu gaystay Hoobiyahaasi. Waxaa sidoo kale uu Hoobiye kale ku dhacay Dhabarka dambe ee Madaxtooyo, halkaas oo isna fariisin u ah Ciidanka Illaaladda Madaxtooyo.
Inta la hubo illaa iyo 4 Hoobiye ayaa la xaqiijiyay inay ku soo dhaceen Hareeraha Madaxtooyadda Somalia, Waxaana Hoobiyayaashan ay qal qal xooggan ka abuureen Madaxtooyadda iyo agagaarkeeda.
Ma ahan markii ugu horaysay ee Maalin cad sidan oo kale laga dhex rido Hoobiyaaal Magaaladda Muqdisho, isla markaana lagu weeraro Madaxtooyadda Somalia. Waxaana Weerarkan Hoobiyayaasha uu imaanayaa xilli uu dhawaan Agaasimaha NISA, Sambaloolshe sheegay inay xasiliyeen Caasimadda Muqdisho.
Hadda: Agaasime Bahlaawi oo ku dhaawacmay Qarax loogu xiray Gaarigiisa.